Tag: nkwari akụ | Martech Zone
Tag: nkwari akụ
Yikes… ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ọnọdụ na nso nso a n'etiti ịrị elu mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta Elle Darby na Paul Stenson, onye nwe Dublin's White Moose Café na Charleville Lodge. Mgbe Elle Darby kpebiri ịga ezumike, ọ gakwuuru ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ ọ nwere ike ịnwe mmasị ịnọ na-ele ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịnọ na ahia maka mgbasa ozi site na ndị na-ege ya ntị na mgbasa ozi mmekọrịta. Onweghi onye na-arịọ maka ego m abụọ,
Site na ndị na - eweta nnabata anyị, ewebatara m CloudFlare. O juru m anya na ọrụ… karịsịa mmalite mmalite (n'efu). Mgbe m rụrụ ọrụ maka onye na-eweta SaaS buru ibu, anyị ahazi ọrụ geocaching ma ọ na-efu anyị ọtụtụ iri puku dollar kwa ọnwa. Enwetaghị CloudFlare maka onye na-eweta SaaS, mana ọ zuru oke maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. CloudFlare bụ ọrụ na-eji teknụzụ nwere ikike mee ka weebụsaịtị na-agba ọsọ na nchekwa na ngwa ngwa
Di m, onye okike na onye okike nwere ọgụgụ isi Steve Nealy (nkwụnye ihere), m nọrọ ụbọchị ole na ole n'izu a na West Baden Springs Hotel dị na ndịda Indiana. Ka m kwuo tupu m banye n'ime anụ nke a na ọ bụrụ na ị bi n'ime ụgbọala (ma ọ bụ karịa karịa) nke ụlọ nkwari akụ a na ndị ọzọ nke French Lick Springs Resort na ị hụbeghị ya (ma ọ bụ ọbụlagodi na ịnwere), ị kwesịrị ime